हामी SEO एजेन्सीबाट के खरीद गर्छौं? - Semalt विशेषज्ञ
एसईओ सेवाहरु का ग्राहकहरु को लागी सबैभन्दा जोखिमपूर्ण र दर्दनाक विषय सधैं आफ्नो पैसा हुनेछ। ठूलो र ठूलो, व्यवसायले ध्यान दिएन कि उनीहरूले कसलाई भुक्तानी गर्छन्। तर कति, कहिले र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केको लागि - यो पहिलो कुरा हो जुन ग्राहकहरूको रूचि हो, र राम्रो कारणका लागि। एसईओ सेवाहरूको बजार विभिन्न प्रस्तावहरूको साथ यति संतृप्त छ कि यो केवल सस्तो विकल्प छनौट गर्न वा सबैभन्दा प्रसिद्ध कम्पनीलाई सम्पर्क गर्न पर्याप्त छैन।
ठेकेदारका सेवाहरूको ढाँचा र व्यापारको सम्भव भएसम्म सम्पुर्ण कार्यहरू भेट्नको लागि, अरू सबै चीजको अतिरिक्त, तपाईंले मूल्य निर्धारणको विवरणहरू र सेवाहरूको लागि भुक्तानी सर्तहरू बुझ्नुपर्नेछ।
SEO सेवा भुक्तान ढाँचाहरू
त्यहाँ विभिन्न भुक्तान विकल्पहरू छन् विभिन्न KPIs मा आधारित। ती प्रत्येकको तर्क छ, प्रत्येक सँग यसको फाइदा, जोखिम, र खतराहरू छन्। चार प्राय: प्रयोग गरिएको भुक्तान मोडेलहरूलाई नजिकबाट हेरौं।
«« डिस्कभर गर्नुहोस् उत्तम Semalt SEO उपकरणहरू तपाइँको साइट वा व्यवसाय को प्रभावी पदोन्नति को लागी »»।
१. स्थितिका लागि भुक्तान
यो भुक्तानी योजना SEO को रूप मा पुरानो हो। ग्राहकले सदस्यता शुल्क थप पारिश्रमिक वा एसईओ कम्पनीले अनुरोध गरिएको अवधिको लागि खोजी परिणामहरूको शीर्षमा ल्याएको अनुरोधहरूको लागि योगदान गर्दछ।
मुख्य वाक्यांशहरूको सूची सहयोगको प्रारम्भिक चरणमा छलफल गरिन्छ। यसको कामको क्रममा, एसईओ कम्पनीले दैनिक अनुरोधको सहमति पोखरीको आधारमा साइटको स्थितिहरूको बारेमा जानकारी सlects्कलन गर्दछ र महिनाको अन्त्यमा ती कुञ्जीहरूका लागि ग्राहकलाई एक चालान जारी गर्दछ जुन यस समयावधिमा माथिल्लो स्थानमा छ। खोज मा स्थिति।
यहाँ ध्यानमा राख्नु महत्वपूर्ण छ कि विभिन्न कुञ्जी वाक्यांशहरूको शीर्षमा पदोन्नतीको मूल्य समान छैन। यो विषयको प्रतिस्पर्धात्मकता, पदोन्नतीको क्षेत्र, र अनुरोध आवृत्तिमा निर्भर गर्दछ।
कस्तो किसिमको कठिनाइहरू भेट्न सकिन्छ?
कुञ्जी शब्दहरूको पोखरीमा सहमत हुन वास्तविक कला हो जुन ग्राहक र एसईओ दुबैको लागि उपयुक्त हुन्छ। यदि ग्राहक विषयको सबै उच्च आवृत्ति प्रश्नहरूको लागि एकैचोटि शीर्ष मा हुन उत्सुक छ, तब एसईओ एजेन्सी प्रवर्धन गर्न सजिलो भएका कुञ्जी शब्दहरूको साथ काम गर्न चाहन्छ। यहाँ एक सम्झौता खोज्नु महत्वपूर्ण छ जसमा व्यवसायले सही स्थान पाउँछ, र ठेकेदारले आफ्नो श्रमको लागि उचित तलब पाउँछ।
क्वेरी स्थानहरूमा विश्वसनीय तथ्या .्कहरू स to्कलन गर्न यो धेरै गाह्रो छ। पहिलो कारण व्यक्तिगत खोज परिणामहरू हो। उही समान डेमोग्राफिक र क्षेत्रका प्रयोगकर्ताहरूका लागि पनि खोजी नतीजाहरू धेरै फरक हुन सक्दछन्। दोस्रो कारण मोबाइल र डेस्कटप उपकरणहरूको लागि बिभिन्न खोज एल्गोरिदमहरू हो।
अनुरोधहरूको रिलिज शीर्षमा सँधै आत्मविश्वासपूर्वक एजेन्सीको योग्यता भन्न सकिदैन। कहिलेकाँही कारण बाह्य कारणहरू हुन सक्छन् जुन अप्टिमाइजरहरूको प्रयासमा निर्भर हुँदैन: खोज इञ्जिन एल्गोरिथ्ममा परिवर्तन, मौसमी माग, र देशको सामाजिक-राजनीतिक अवस्था पनि।
स्थितिहरूको लागि भुक्तान गर्दा, खैरो एसईओमा खेल्ने जोखिम धेरै हुन्छ, जब ठेकेदार व्यवहार कारकहरू, ठुलो खरीद लि links्कहरू, उपग्रहहरू सिर्जना गर्ने आदिलाई ठग्दै परिणाम प्राप्त गर्न कोसिस गर्दछ भने, यी सबै खोज ईन्जिनहरूले सजीलै पहिचान गर्दछन्, र ढिलो होस् वा चाँडो साइट प्रतिबन्ध अन्तर्गत आउनेछ।
आफैलाई एसईओ एजेन्सीहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरू द्वारा जोगाउनुहोस् आज semalt.com भ्रमण गर्दै।
२. जैविक यातायातको लागि भुक्तान गर्नुहोस्
एक जवान, तर SEO सेवाहरूको लागि भुक्तानको सामान्य प्रकार। यहाँ, गणनाको लागि आधार ट्राफिकको मात्रा हो जुन एक महिनाको अवधिमा एक खोज इन्जिनबाट साइटमा आएको थियो। यस मूल्यमा निश्चित सदस्यता शुल्क थपिएको छ, जुन ग्राहकले पदोन्नतिको परिणामलाई वास्ता नगरी गर्न बाध्य छ।
कामको सुरूवातमा एसईओ विशेषज्ञहरूले साइटमा हालको ट्राफिक नाप्छन् र सुरूवात विन्दुको रूपमा लिन्छन्। यो विश्वास गरिन्छ कि यस जैविक गैर-ब्रांडेड ट्राफिक जुन साइटमा यो रकम भन्दा बढी आएको थियो सर्च इञ्जिन प्रमोशनको परिणाम हो, जबकि बेईमान ठेकेदारहरूले सबै यातायातको वृद्धिलाई कामको परिणामको रूपमा लिन्छन्।
त्यसो भए, विषयवस्तु, मौसमी, र अन्य कारकहरूलाई ध्यानमा राख्दै, साइटमा प्रत्येक अद्वितीय आगन्तुकको मूल्य गणना गरिन्छ। रिपोर्टिंग अवधिको अन्तमा, परिणामस्वरूप मान आकर्षित गरिएको ट्राफिकको मात्राले गुणा हुन्छ। यसलाई ध्यान दिइन्छ कि अधिक अनौंठो आगन्तुकहरू साइटमा आए, राम्रो एजेन्सीले प्रदर्शन गरेको छ र अधिक पुरस्कारले यसलाई प्राप्त गर्दछ।
यस्तो देखिन्छ कि सबै कुरा अत्यन्त तार्किक र निष्पक्ष छ: यदि त्यहाँ ट्राफिक छ - ग्राहकले भुक्तानी गर्छ, कुनै यातायात छैन - ग्राहकले अझै मासिक शुल्क (अनुकूलन, सामग्री, आदि) को साईटसँग साइटको न्यूनतम सेट प्राप्त गर्नेछ। )। सबै कुरा त यो हो यदि तपाईं महत्त्वपूर्ण सूक्ष्मताहरूलाई ध्यानमा राख्नुहुन्न:
वेबसाइट यातायात अत्यधिक मौसमी र ​​आला प्रवृत्तिमा निर्भर छ। सिजनको उचाईमा वा बिषयको चारैतिर हाइपको समयमा, आगन्तुकहरूको संख्या बढ्नेछ, र ग्राहकले ती सूचकहरूलाई थप पैसा तिर्नेछ जुन एजेन्सीको सहभागिताबिना प्राप्त गरिएको थियो।
खराब महिनाहरूमा, जब ट्राफिक वृद्धि कमजोर हुन्छ, तपाईंले अझै सदस्यता शुल्क तिर्नु पर्छ। उही समयमा, व्यवसायले एक जना आगन्तुकको लागतमा एक छिटो उछाल प्राप्त गर्नेछ।
यातायात को मात्रा गुणवत्ता बराबर छैन। साईटमा आगन्तुकहरूको स the्ग्रह ग्राहकको सबै वाइल्ड अपेक्षाहरू भन्दा बढि भए पनि, त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी छैन कि परिणाम स्वरूप यसको वास्तविक व्यापार र नाफाको रूपमा व्यवसायले यसबाट फाइदा लिन सक्छ। ग्राहकले एजेन्सीलाई अनुबंधमा रूपान्तरण समावेश गर्न प्रस्ताव गरेर हेज गर्न सक्दछ। तर यो सूचक धेरै कारकहरू (मूल्य निर्धारण नीति, साइट डिजाइन, इत्यादि) द्वारा प्रभावित छ जुन अनुकूलकहरूले एक एसईओ को रूपरेखा भित्र प्रभाव पार्न सक्दैन। त्यसकारण एजेन्सीहरू ग्राहकहरूलाई सहुलियत दिन धेरै आनाकानी गर्छन्।
यदि एक एजेन्सी ग्रे-स्केल एसईओ अभ्यास गर्दछ भने, संभावना अधिक छ कि ट्राफिक कृत्रिम रूपमा संचालित हुनेछ। ग्राहकका लागि यसको अर्थ बजेटको खेर फाल्ने र नाफा गुमाउने मात्र होइन, तर सर्च इञ्जिन फिल्टरहरूमा पर्ने खतरा पनि हो।
वास्तवमा, यो मुख्य कारण यो हो कि Semalt जस्ता पेशेवर एसईओ एजेन्सीहरूसँग सहकार्य गर्न सुनिश्चित गर्न औचित्य ठहराउँदछ जसले सामान्यबाट बाहिरका सेवाहरू प्रदान गर्दछ।
Leads. सीसाका लागि भुक्तान गर्नुहोस्
अर्को पूर्ण पारदर्शी भुक्तानी योजना जुन विशेष रूपमा बजारहरूमा लोकप्रिय छ। यस मामलामा, ग्राहकले सदस्यता शुल्क र साइट आगन्तुकहरू द्वारा प्रतिबद्ध लक्षित कार्यहरूको लागि प्रीमियम भुक्तान गर्नेछ।
जब एउटा सम्झौता बनाउँदा ग्राहक र एजेन्सी अनुगमन गरिने लिडको सूचीमा सहमत हुन्छन्। त्यसोभए ग्राहकले यी कार्यहरूको लागि मात्र भुक्तान गर्नुपर्नेछ। नेतृत्वले सम्पर्क जानकारी छोड्ने, कल गर्ने, साइटबाट अर्डर गर्ने, परामर्श अनुरोध गर्ने, आदि हुन सक्छ।
ट्राफिक वा शीर्षमा अवस्थाहरू भन्दा लक्षित कार्यहरू प्रदान गर्न एजेन्सीको लागि यो धेरै नै गाह्रो हुन्छ, त्यसैले शिशुको लागत र मासिक शुल्कको आकार सधैं भुक्तानीको यस प्रकारको साथ बढी हुनेछ।
कामको यो ढाँचा एजेन्सीलाई कडा विश्लेषकहरू र एसईओ विशेषज्ञहरू, साथ साथै एक ठूलो समर्थन टोली, साइटमा द्रुत सुधार गर्न को लागी आकर्षित गर्न आवश्यक छ। उच्च स्रोत खपतका कारण, एजेन्सीहरू यस भुक्तानी योजनामा ​​केवल थोरै ग्राहकहरूको साथ काम गर्न सहमत छन्। नियमको रूपमा, यी प्रसिद्ध ब्रान्डहरू वा कडा व्यवसायहरू हुन्।
नेतृत्व लिनुको मतलब यो होइन कि खरीद गरिनेछ। अर्डरहरू भन्दा धेरै पटक सशुल्क लक्षित कार्यहरू छन्। लक्षित कार्यको अपेक्षाकृत उच्च लागतलाई ध्यानमा राख्दै (यसमा सदस्यता शुल्क थप्नुहोस्), ती "रिक्त शटहरू" व्यवसायका लागि महँगो हुन सक्छ।
बेइमान एजेन्सीहरूसँग सहयोग गर्दा, कृत्रिम रूपमा एप्लिकेसनहरूको मात्रा बढाउने जोखिम हुन्छ। दिइएको छ कि ठेकेदारहरू वास्तविक ग्राहकहरूलाई लिड्स रूपान्तरण गर्न जिम्मेवार छैनन्, "योजना पूर्ण गर्न" प्रलोभन यस तरिका एकदम कडा हो।
Work. कामको लागि भुक्तान
सम्पर्क गरेर SEO एजेंसी यो भुक्तानी विकल्पको साथ, ग्राहकले कार्यको निश्चित दायराको लागि भुक्तान गर्नुपर्नेछ ... तिनीहरूको लक्ष्य एक निश्चित परिणाम प्राप्त गर्नु हो, जुन सीधा सम्झौतामा आउट गरिएको छैन। SEO एजेन्सी कामको पूर्ण र समयमै समाप्तिको लागि मात्र ग्राहकको लागि जिम्मेवार छ।
समयमा कार्यको पूर्ण सूची पूरा गर्नु एजेन्सीमा पूर्ण निर्भर गर्दछ। यो एक मात्र तरीका हो कि एसईओ कम्पनीले १००% ग्यारेन्टी दिन सक्छ। यो विकल्पको साथ, SEO सेवाहरूको प्रावधान सकेसम्म पारदर्शी छ।
सेवाहरूको सूचीलाई ध्यानमा राखेर ग्राहक कस्तो किसिमको पदोन्नति बजेट विनियोजन गर्न तयार छ को गठन गरीएको छ। अनुमोदनको चरणमा, कार्यहरूको सम्पूर्ण पोखरी समान रूपमा धेरै महिनाहरूमा वितरित हुन्छ (सामान्यतया कम्तिमा छ)। एकै साथ ग्राहकले परियोजनामा ​​ठेकेदारको काममा सक्रिय हिस्सा लिन्छ: तुरुन्त स्वीकृत गर्दछ वा वेबसाइट आफ्नैमा सुधार गर्दछ। प्रत्येक महिना, ग्राहकलाई पछिल्लो अवधिमा के गरियो भनेर रिपोर्ट प्रदान गरिन्छ। ग्राहक र ठेकेदार बीचको घनिष्ठ सहयोग परियोजना दृष्टिकोणका सिद्धान्तहरू मध्ये एक हो, जुन हामीले पहिले लेख्यौं।
बजेट वितरणको लागि अर्को विकल्प अनुकूलनको क्षेत्रहरूमा छ: प्राविधिक सुधार, सामग्री समर्थन, र लि of्कहरूको खरीदको लागि। कोषहरूको एक ठूलो रकम अधिक sags दिशा मा विनियोजित गरिएको छ, वा एक बाट सबै भन्दा राम्रो प्रभावको आशा गरिन्छ।
कामको लागि भुक्तानीको साथ प्रचार गर्दा, सबै सहभागीहरू अधिकतम प्रक्रियामा संलग्न छन्, ग्राहक आफैंमा। यसले केवल पैसा तिर्ने र परिणामको लागि प्रतीक्षा गर्न कार्य गर्दैन। एजेन्सी र ग्राहक बीचको कुराकानी पूर्ण रूपमा स्थापित हुनुपर्दछ, र क्लाइन्ट विशेषज्ञको सिफारिसमा बिजुलीको वेगको साथ प्रतिक्रिया दिन तयार हुनुपर्दछ। यो राम्रो छ यदि कम्पनीसँग पूर्ण-समय मार्केटर छ जो ठेकेदारसँग अन्तर्क्रियाको लागि पूर्ण जिम्मेवार हुन सक्छ।
यदि साइटसँग धेरै संख्यामा प्राविधिक समस्याहरू छन्, तिनीहरूलाई फिक्स गर्दा पदोन्नती बजेटमा फिट नहुन सक्छ। त्यसकारण, साइटको सुधार गर्नको लागि ग्राहकसँग थप कोषहरू हुनुपर्दछ, वा कम्पनीको आफ्नै वेब विकासकर्ता हुनुपर्दछ।
SEO सेवाहरूको मूल्य कसरी छ?
परियोजनाको सफल पदोन्नतिको लागि, प्रत्येक साइटको लागि एक निश्चित कार्यको आवश्यक छ। यी कार्यहरूको सूची र कार्यक्षेत्र पुनरावृत्तिगत विश्लेषणको परिणामहरूको आधारमा गठन गरिन्छ। यस अवस्थामा, एसईओ सेवाहरूको लागि मूल्य ट्याग कुन कुन विशेषज्ञहरूले परियोजनामा ​​काममा भाग लिने छ र कति घण्टा काममा खर्च गर्नुपर्दछ त्यसमा निर्भर हुन्छ। त्यसो भए प्रत्येक विशेषज्ञको म्यान-घण्टा संख्या घण्टा दरले गुणा गरिन्छ।
नियमको रूपमा, धेरै विशेषज्ञहरूले परियोजनामा ​​भाग लिन्छन्।
१. अग्रणी एसईओ विशेषज्ञ
कार्यको थोक प्रदर्शन गर्दछ, अनुरोधहरूको कोर फाराम गर्दछ, र सम्पूर्ण साइट अप्टिमाइजेसन रणनीतिको लागि जिम्मेवार छ।
२ जुनियर एसईओ विशेषज्ञ
प्रमुख विशेषज्ञलाई सहयोग पुर्‍याउँछ, केहि अनुकूलन कार्यहरू लिन्छ।
Account. खाता प्रबन्धक
यो ग्राहकहरु र एजेन्सी बीचको लिंक हो। उसले ग्राहकका प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ, सुधारको समयमै स्वीकृतिका लागि जिम्मेवार हुन्छ, प्रतिक्रिया संकलन गर्दछ।
Copy. प्रतिलिपि लेखक र सम्पादकहरू
SEO- अनुकूलनकर्ताहरूको सन्दर्भका सर्तहरूमा उच्च-गुणको पाठहरू लेख्न जिम्मेवार छ। प्रतिलिपि लेखक र सम्पादकहरू ... एसईओ अनुकूलनकर्ताहरूको लागि सन्दर्भका सर्तहरूमा उच्च-गुणको पाठहरू लेख्न जिम्मेवार छ।
Link. लिंक निर्माणकर्ता
यसको कार्य लि link्क रणनीति रचना र कार्यान्वयन गर्नु हो।
साइटको समाप्ति पूरा गर्दछ (गति अप्टिमाइजेसन, संरचनामा परिवर्तनहरू, प्रतिक्रिया कोडहरू सेट अप गर्दै, ट्यागहरू प्रदर्शन गर्दै, र हेडरहरू)।
साथै, एसईओ सेवाहरूको लागतमा साइटको संशोधनका लागि खर्चका अतिरिक्त वस्तुहरू, लि links्कहरूको खरीद (यदि आवश्यक भएमा), वेब एनालिटिक्स, र स्वचालन सेवाहरू समावेश छन्। यी सबै लागतहरू पदोन्नतिको लगभग हरेक चरणमा उपस्थित छन्। महिना देखि महिनामा मात्र उनीहरूको प्रतिशत परिवर्तन हुन्छ। उदाहरणको लागि, कामको सुरूवातमा, धेरै पैसा लेख्न र कम लि links्क खरीदमा खर्च हुनेछ, त्यसपछि परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ, र यससँगै बजेटको वितरण हुन्छ। एकै साथ, परियोजना टोलीको कामका घण्टा मूल्य निर्धारणको आधारमा रहन्छ।
काश, एसईओ सेवाहरूको लागि आदर्श भुक्तान मोडेल, जुन सबै पक्षहरूलाई अनुबंधमा बराबर लाभदायक र सुविधाजनक हुनेछ, अझसम्म आविष्कार गरिएको छैन। प्रत्येक वर्णन गरिएको योजनाहरु का आफ्नो फाइदा र हानिहरु छन्। विकल्प जुन एक ठूलो संघीय कम्पनीको लागि इष्टतम हुनेछ नयाँ सिर्जना गरिएको अनलाइन स्टोरलाई उपयुक्त छैन। तसर्थ, ग्राहकहरु लाई पेशेवर र विपक्ष तौल र विकल्प छनौट गर्नु पर्दछ जुन उनीहरूको आवश्यकता र क्षमताहरु लाई उत्तम सूट गर्दछ।
यस अवस्थामा, व्यवसायीहरूको लागि आदर्श भनेको व्यावसायिक एसईओ मानिसहरू जस्ता सन्दर्भमा हो Semalt अपेक्षित परिणाम बिना खर्चसँग सम्बन्धित धेरै समस्याहरूबाट बच्नको लागि।
एक वा भुक्तानी को एक अन्य तरीका संग एक ठेकेदार छनौट गर्दा, हामी प्रस्तावित मोडेल छ कसरी बाट शुरू सिफारिस:
बुझ्न सकिने र पारदर्शी ... आफैलाई प्रश्न सोध्नुहोस्: "मलाई थाहा छ के म तिर्दैछु, के मैले तिर्दैछु?";
आर्थिक हिसाबले पर्याप्त ... कामको अन्तिम परिणाम तपाइँलाई कति कति खर्च हुन्छ गणना गर्नुहोस्;
परियोजनाको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यहरू पूरा गर्दछ ... प्रतिज्ञा गरिएको परिणामले तपाईंलाई तपाईंको रणनीतिक लक्ष्यको नजिक ल्याउने कति विश्लेषण गर्नुहोस्।
यी तीन बुँदाहरूमा प्रत्येक सुझावको मूल्यांकन गर्नुहोस् र निर्णय गर्नुहोस्। तर याद गर्नुहोस्: सब भन्दा कम मूल्यको अन्धा खोजी भविष्यमा कम परिणामहरू र अधिक भुक्तानीको लागि प्रत्यक्ष मार्ग हो।